QAJAARKA KORAYA EE FOOSTO: SHARAXAADDA HABKA - BEER CAGAARAN
Waxaan ku koraynaa hab cusub: qajaarka foosto
Xilliga ama wakhti dambe, ninkii beerta ka shaqeeyaa waxa uu la kulmay dhibaatada booska la'aanta. Xaaladdani waxay soo ifbaxeysaa markaad rabto inaad korto noocyo cusub oo cusub ama noocyo khudaar ama midho ah goobtaada, iyo dhammaan duurka ama geedaha si fudud ha u helin meel ku filan. Tani waxay si gaar ah u tahay dhaqanka noocan ah sida qajaarka, taas oo u baahan meelo badan oo loogu talagalay koritaanka.
Xaaladdan, waxaa jira wax kale oo ku farxi kara xitaa beerta khibrad leh haddii uusan horay u soo gelin.
Qajaarrada waxaa lagu kori karaa foosto, iyo walxaha laga sameeyo waxa la sameeyey waxay noqon kartaa wax kasta. Kala duwanaanta noocyada qajaarka qajaariga ah ayaa badbaadiya dhulal badan oo loo isticmaali karo in ay koraan dalagyada yar-yar. Laakiin waxaa jira tiro balooga ah oo ku saabsan habkan ee beerista, taas oo aan la iloobin.
Qajaarada qajaarka ah ee foosto, sida habab kale oo beergooyska, ayaa leh faa'iido iyo khasaaro.
Ku faa'iidooyinka Waxaad ku dari kartaa fursad aad ku badbaadin karto goobaha dhirta kale, daryeelka duurka, gaar ahaan, ka saarista weedka iyo mulching uma baahna tamar badan iyo dadaal, iyo qajaarka foostada waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican, sidaa daraadeed waxaad u bedeli kartaa goobta beertaada.
Minus waxyaabaha sida qalajinta xoogga ah ee ka soo baxa ciidda ayaa la tixgeliyaa, taas oo ah, geedo kori kara sida caadiga ah (dhulka) waxay heli karaan biyaha dhulka, iyo dhirta "nool" ee foostadu ma heli karaan qoyaan dheeraad ah haddii ay dhacdo abaarta.
Xaqiiqadani waxaa lagu sharxi karaa sida soo socota: ka dib markii roobku dhammaado, biyaha ayaa gala dhulka, sidaas darteed dhulkuna wuxuu ku sii qulqulayaa wakhti dheer, iyo haddii ay dhacdo foosto, biyaha roobka si dhakhso ah ayey uga baxaan oo sidoo kale dhulka ku soo baxaan. Laakiin duurka qajaar ah ma leeyihiin xididada aad u dheer, taas oo ah, waxay si fudud ma gaari karo oo u dhiman karaa ka hor qoyaanka la doonayo.
Horeba su'aashu waxa ay soo baxaysaa: "Laakiin sida loo diyaariyo foosto si la mid ah habka koritaanka?" Jawaabta su'aashan ayaa jirta, iyo mid dhammaystiran. Diyaarinta beerta la beeray ayaa bilaabmaysa guga horraanta, marka barafku gebi ahaanba dhalaalay.
Waxaan u baahannahay inaan qaadno qalfoofka foosto, si aan "hoos ugu dhigin ama aan taakulayn." Way fiican tahay, dabcan, in la qaato saldhig alwaax ah, maaddaama ay tahay wax dabiici ah oo "neefsanaya", laakiin foostada birtu waxay kaloo shaqaysaa.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad buuxisid foostoyinka qashinka organic, cawska qallalan (waxay noqon kartaa da '), iyo sidoo kale digada qudhuntay iyo dhulka. Si loo nadiifiyo iskudhafkan, iyo sidoo kale in la kordhiyo heerka bacriminta, waxaa lagama maarmaan ah in lakabka lakin ugu diyaargaroobo diyaar garo gaar ah oo laga iibsan karo dukaamo khaas ah.
Marka xigta, foostada horay loo buuxiyay waa in lagu daboolaa filim oo aan la taaban wiigii. Kadib dhammaadka wakhtigaan, mugga qaddarka waa la jarayaa, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad ku darto digada iyo qudaarta qudaarta ah ee mar kale. Waxaad u baahan tahay inaad sii wadato nidaamkan illaa inta ugu horeysa ee bisha May.
Bartamaha May ee foosto waxaad u baahan tahay inaad dhulka ku buuxisid lakabka 10 cm iyo abuurka prikopat. On hal keg 6 - 8 abuurka waa in ay tagaan, iyo ka hor inta beero ciidda waa in la jeermiska by daaweynaya ciidda leh xal of kaneecada iyo biyo karkaraya.
Habka seedling ee habka noocan oo kale ah ee qajaarka sii kordhaya aan la isticmaali karin, laakiin waa inaad adiga si aad u diyaariso geedo horay ama aan.
Gudaha abuur waa in si siman loo qaybiyaa, fogaan ah oo ku saabsan 15 cm midba midka kale. Ka dib beerashada, mid kasta oo "sariir" oo kale ah waa in lagu daboolaa polyetylen, doorbidiisa madow, si ay abuurka u dhaqso u dhaqso.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga tago meel bartamaha ah isla markaana ku rid weel yar oo biyo ah oo uumi-baxaya filimka hoostiisa, oo samee microclimate fiicno. Sababahan oo kale, wax soo saarka ayaa Gagaabku ka dhaqso badan yahay geedo in aad ku koraan aqalka.
Biyaha ku jira taangiga ayaa u baahan doona si joogto ah ku shub, iyo sidoo kale si kooban u furi filimka laftiisa, si ay abuurka ah "ma gubay." Waxaa la ogyahay in ay duurka qajaar aad u caato ah, marka marka ay galaan marxal firfircoon ee horumarinta daaqsinka, caleemaha u baahan doonaa taageero dheeraad ah, kaas oo afduubka waa in lagu tilmaamo. Taageeradan ayaa u adeegi doonta xadhig xadhig ahin lagu rakibo kor u kaca foostada laftiisa, geli dhinacyada qoryaha dhulka.
Fursad kale ayaa noqon karta in lagu rakibo siddooyinka sare ee foostada, laakiin taa macnaheedu, dhowr rodol qaro weyn ayaa u baahan doona in lagu dhajiyo nalka sheyga, kaas oo, ka dib, ulaha wareega ayaa u baahan doona in la hagaajiyo.
Waxa ugu muhiimsan waa in taageerada waa in ay adkaysataa miisaanka caleemaha si wadajir ah midhaha, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u hubiso in jirku uusan jebin. Haddii loo baahdo, waxay u baahan doontaa in la xoojiyo.
Bilowga Juun, marka cimiladu hore u soo baxday, filimka ayaa laga saari karaa oo wuxuu ku ridi karaa foosto dhul ah. Ku celinta nidaamkii ugu dambeeyay wuxuu u baahan doonaa si joogto ah, maadaama dhulka uu degayo.
Daryeelidda qajaarka leh qaabkan beerashada waxay noqon doontaa mid aad u sahlan marka loo barbardhigo dhirta lagu koriyo ama duurka. Looma baahna in la xoqo ama dhirta cawska, cawska foosto lama sameyn doono. Waxa kaliya ee aan la iloobi karin waa biyaha waraabinta iyo dhar xidhashada, sababtoo ah haddii kale waxaad heli doontaa goosashada la filayo.
Nidaamkan qajaarka taranta wuxuu noqon doonaa ilaahyo loogu talagalay kuwa beerta kuwaas oo doonaya in ay helaan goosashada hore. Ka dib oo dhan, foosto sida si fudud loo dhigi karaa in lagu koriyo kulul, u diyaari iyaga, ku beeray abuur ah qaar ka mid ah hore iyo aan qabyo ahayn, iyo ka dib muddo gaaban helitaanka goosashada cajiib ah.
Inkasta oo xaqiiqda ah in qajaarka aqalka dhirta ay ka liidato dhadhanka ciidda, leh beerashada saxda ah iyo daryeel wanaagsan, waxaad ka heli kartaa qajaarka tayo sare leh oo ka yar kuwii aad dib u koraan carrada. Ha ka baqin inaad tijaabiso, waadna ku guuleysan doontaa!